Yili Pressure Washer YLW 6273E-35L
-1400 Watts -၃၅ လီတာ စတီးအိုးစစ်စစ်
-အစို အခြောက် ရတော့ အိမ်၊ဟိုလ်တယ် နဲ့ ရုံးတွေအတွက် အဆင်ပြေစေပါတယ်။
-Motor ရဲ့ Speed ကိုလည်း အလျော့ အတင်း လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။
-ခေါင်းမျိူးစုံပါတော့ ကျယ်တဲ့နေရာမှာ သုံးမလား? ချောင်ဂလောင်ထဲ နိူက်မလား ?
-အာမခံ ၆လနဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေလည်း လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်
Yili Pressure Washer YLQ-4420G T4 Plus
" Carbon brush " အမျိုးအစားမဟုတ်ပဲ Induction Motor အမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့် ရရှိနိုင်မဲ့
✅ အားသာချက်တွေကတော့ ✅
အချိန်ကြာကြာ ဆက်တိုက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း.။
ရေသုံးစွဲမှု သိသိသာသာ သက်သာခြင်း .။
IPX5 waterproof level ဖြစ်တာကြောင့် ရေစိုဒဏ်ခံနိုင်ပြီး မိုးရွာနေတုန်း အသုံးပြု ဦးမလား အေးဆေးပဲ။
=============== Gun ကို ညှစ်ပြီး အသုံးပြုချိန်မှာသာ စက်ကို အလုပ်လုပ်စေတဲ့ Auto Stop System နည်းပညာပါဝင်တာကြောင့်.. Power သုံးစွဲမှု အထူးကိုသက်သာတဲ့ အပြင်..။
စက်ရဲ့ သက်တမ်းကိုလည်း ပိုရှည်ကြာစေပါတယ်..။
================== အစအဆုံးတပ်ဆင်သုံးဖို့ အတွက်က အချိန် (၃)မိနစ်ဘဲလိုတယ်နော် ဒီလောက်တောင်လွယ်တာပါ.။
အာမခံချက်က (၆)လ တိတိဆိုတော့ စိတ်ချလက်ချသာ သုံးစွဲ လိုက်တော့ဗျို့..(မီးအား အတက်အကျကြောင့် မော်တာလောင်ကျွမ်းတာတော့ အာမခံချက် အကျုံး မဝင်ပါဘူးနော်)
Yili Pressure Washer YLQ4420G-105Bar
-Max pressure : 105Bar
-Rated power : 1300W
-Motor Type: Induction
-Power cord : 3m
-Intel pipe/length :3m
Yili Pressure Washer YLQ9021-85Bar
-Max pressure : 100W
-Rated power : 1400W
-Material Type:PLASTIC AND METAL
-Temperature : 40ံC
Yili Pressure Washer YLQ4435C-90Bar
Yili Pressure Washer YLQ4430C-100Bar
LEECOထိုင်ခုံများကိုအရည်သွေးသလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ကြာရှည်ခံဖို့အောင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ခေတ်မီ၊ စတိုင်ကျပြီးသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေဖို့အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဘယ်လိုရုံးလုပ်ငန်းမှာမဆို အသုံးပြုလို့အဆင်ပြေစေမယ့်ထိုင်ခုံများဖြစ်ပါတယ်။
LEECO Hwadu Chair QZY-1537